VALVOLINE DURABLEND SAE 10W-40 API SN – BUDOZAR
Home Lubricants Car VALVOLINE VALVOLINE DURABLEND SAE 10W-40 API SN
VALVOLINE DURABLEND SAE 10W-40 API SN
ID: BDZ 8245
Country of Origin : USA Brand Name: VALVOLINE Product Name: Automotive (Semi Synthetic) Part Number : 690814/887715 Delivery : Buy 1 Case -Free Delivery ( YGN Area)
Size :4Liter
VALVOLINE DURABLEND SAE 10W-40 API SN quantity
This Month Viewers : 70
1)တိုက်စားမှုဒဏ်ကို ကြာရှည်ခံနိုင်သဖြင့် အင်ဂျင်၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သက်တမ်းအတွက် ကောင်းမွန်ခြင်း။2)အင်ဂျင်ဝိုင်၏ ခိုင်ခန့်သောအရည်အသွေးနှင့် ညက်ညောမှုကြောင့် အင်ဂျင် အပူချိန် မြင့်မားလာချိန်တွင် အင်ဂျင်ဝိုင်၏ gradeကျလာခြင်း မဖြစ်ပဲ အင်ဂျင်ပျက်စီးမှု မှ ကာကွယ် ပေးနိုင်ခြင်း။3)အင်ဂျင်သက်တမ်းကို ကြာမြင့်စေခြင်း။4)အင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြင့်ဆုံး ဖော်ဆောင် နိုင်ခြင်း။
Valvoline DuraBlend သည် ရေနံစိမ်းကို စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီသန့်စင်ပြီးရရှိသည့် အခြေခံ ဆီသားကို ကောင်းမွန်သော ဓါတ်တိုး ပစ္စည်းများဖြင့် အချိုးကျ ပေါင်းစပ် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ခရီးကြမ်း မောင်းနှင်ရသည့် အင်ဂျင်များအတွက်အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။
အကောင့်အသစ်တစ်ခု တည်ဆောက်ပြီး မှတ်ချက်ပေးလိုက်ပါ
ရောင်းသူ Thin Thin Htay
ZEREX SUPER SEALER
Size : 14.5 oz
11,500 Ks Add to cart
Valvoline DEX III ATF
Size : 1 Liter
Package : 1 case – 24 bottles
8,000 Ks Add to cart
VALVOLINE™ Fully Synthetic MOTOR OIL SAE 5W-30 API SP / ILSAC GF-6
SYNPOWER SAE 5W-30 isapremium fully synthetic motor oil formulated with the highest quality synthetic base oils and enhanced with the most advanced additive technology for ultimate performance in meeting the latest requirements for modern engines.
SYNPOWER SAE 5W-30 is specially designed to provide high levels of fuel efficiency and deposit protection under severe service conditions and meets the performance requirements of virtually all naturally aspirated, turbocharged and supercharged passenger cars including European and Asian passenger cars.
89,300 Ks Add to cart
CHAMP 4T SCOOTER SAE 10W-40 API SL,JASO MB
8,800 Ks Add to cart
PREMIUM CONVENTIONAL SAE 10W-30 API SN
42,000 Ks Add to cart
POWER COMMONRAIL 10W-30 SEMI SYNTHETIC ENGINE OIL
Package Size : 1 case –4bottles
80,200 Ks Add to cart
Valvoline SUPER COOLANT ORGANIC (Green)
7,700 Ks Add to cart
Copyright © 2022 by BUDOZAR. All right reserved. Developed by Openmind Myanmar